Joined: 17 Aogositra 2017, 18:11
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Pierre B » 19 Aogositra 2017, 16:17
Niasa tamin'ny fivoarana simulator Panther (Copter) tamin'ny Prepar 3D 3.2 (rindrambaiko fanaingoana sidina) aho. Nametraka ny kinova Dirk Fassbender Autopilot voalohany aho ary avy eo ny fanavaozana. Tsara daholo ny zava-drehetra.
Azoko atao ny mitondra ny maody autopilot rehetra miaraka amin'ny maody Autopilot.
Fa izao dia te-handrisika ny maody Autopilot mivantana aho P3D. Tsy haiko ny fomba fiasan'ity modely ity.
Rehefa nampidina ny HC075DI_FSX_COUGAR_AUTOPILOT.zip Hitako fa ao anatiny misy fisie antsoina hoe afcp.cfg. Ao anatin'ity fisie ity dia misy ireo codekey isan-karazany handrisihana ireo fomba hafa an'ny Autopilot.
Nanandrana nitantana ny maody autopilot aho tamin'ny alàlan'ny codekeys dia ao amin'ny afcp.cfg mivantana ao P3D fa tsy misy vokany.
Misy olona manana hevitra ahoana no hatao?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Pierre B » 24 Aogositra 2017, 18:02
Ny ratsy, tiako ny hampandeha ny maody autopilot tsy mitovy amin'ny hitsin-dàlana fitendry fa tsy misy kaody lehibe.